Xiriirka kubadda cagta Spain oo go’aamiyay murankii ka taagnaa qabsoomida kulanka El Clasico – Gool FM
(Spain) 17 Oct 2019. Wargeysyo badan ee kala duwan ayaa waxay shaaca ka qaadeen in xiriirka kubadda cagta ee dalka Spain uu go’aansaday in dib loo dhigo kulanka adag ee El Clasico.
Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa ku balansanaa inay ku wada ciyaaraan garoonka Camp Nou 26-ka bishan Oktoobar ee ku beegan maalin Sabti ah kulankooda lugta hore ee horyaalka La Liga.
Sida laga soo xigtay dhamaan wargeyska Mundo Deportivo, Cadena SER iyo Marca, xiriirka Isbaanishka ayaa go’aansaday in dib loo dhigo kulanka El Clasico ilaa iyo 18-ka bisha Diseembar oo ku beegan maalin Arbaco ah, sababa la xiriira amniga dartiisa.
Go’aanka xiriirka Spain ee dib loogu dhigay kulanka El Clasico sababao amniga dartiisa ayaa imanaya xilli ay magaalad Barcelona isla maanta ay ka socdeen banaanbaxyo waaweyn ee siyaasadeed.
Go’aankan ayaa yimid kaddib markii ay diideen kooxaha Barcelona iyo Real Madrid, codsigii ay u soo jeediyeen gudiga horyaalka La Liga ee ah in la beddelo garoomada si kulanka El Clasico loogu ciyaaro garoonka Santiago Bernabéu, halkii lagu ciyaari lahaa Camp Nou, laakiin labada dhinacba wey iska diideen codsigan.